Umthandazo kwiSigramente Esikelelekileyo Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
Apha ungafumanisa ukuba yintoni iSakramente Esikelelekileyo, yintoni eyenza iSakramente Esikelelekileyo kwaye ungafunda i- Umthandazo kuBasikeleleyo umthendeleko.
1 Umthandazo weyona Ngcwele YeSakramente: Yintoni leyo?
1.1 Iisakramente zolwaluko zezi:
1.2 Iisakramente zokuphilisa zezi:
1.3 Iisakramente zenkonzo yoluntu zezi:
2 Umthandazo kweyona sacramente ingcwele
Umthandazo weyona Ngcwele YeSakramente: Yintoni leyo?
Isakramente sisenzo senkolo apho irhamente libonakalisa ubudlelwane balo noThixo. Umthendeleko oSikelelekileyo ngumzimba negazi likaYesu elimele iSonka newayini. Oku kubhekisa kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela sikaYesu Krestu nabafundi bakhe; Ikwabizwa ngokuba lidini elingcwele, isidlo sangokuhlwa seNkosi, ukuqhekeza isonka, umthendeleko, isakramente elisikelelekileyo, iimfihlakalo ezingcwele okanye isidlo sangokuhlwa esingcwele.
Zisixhenxe iisakramente kwaye zona zona zahlulwe zangumngcwabo wolwaluko, iisakramente zokuphilisa, kunye neesakramente zenkonzo yoluntu.
Iisakramente zolwaluko zezi:
El bautismo: Se entiende el bautismo como un sacramento que representa la apertura de las puertas del inkolo yamaKrestu a una persona. Es una inclusión al gran cuerpo místico de Cristo.
Isiqinisekiso: Isiqinisekiso, njengoko igama lisitsho, siqinisekisa ukholo lomntu kuYesu Krestu. Isithembiso sokuqala okanye umanyano olwenziwe ngobhaptizo luyaqinisekiswa, kule sakramente bayamkelwa Izipho zoMoya oyiNgcwele.
UMthendeleko: Lo mthendeleko ngumbhiyozo wokukhumbula uKrestu, esi sikhumbuzo sothando, uvuko kunye nesidlo sakhe sangokuhlwa sokugqibela, kuloo mbhiyozo, umKristu ufumana uMamkeli ozinikeleyo.
Iisakramente zokuphilisa zezi:
Uxolelwaniso: Uxolelwaniso ngumthendeleko osekwe ekuvumeni izono phambi kombingeleli, apho yena ngokwakhe asebenzise isohlwayo ekufuneka sizalisekisiwe ukuze uxolelwaniso noKrestu lubonwe luphelele.
Ukuthanjiswa kwabagulayo: Ukuthanjiswa kwabagulayo yisakramente ekuthi ngayo umthandazo ufundwe kwaye uthambise abagulayo ukuze bavuselelwe ngokholo.
Iisakramente zenkonzo yoluntu zezi:
Umyalelo wobubingeleli: Umyalelo wobubingeleli ngumthendeleko oza kuqhutyelwa ukunika umyalelo ovumela ukugunyaziswa kwemisebenzi yeecawa kunye neenkonzo ezisebenza ukuqinisekisa nokuqinisekisa unqulo lukaThixo.
Umtshato: Yisakramente eseka kwaye ingcwalise umanyano phakathi kwendoda nomfazi, kwaye iseke usapho olutsha lobuKristu. Lo mthendeleko umele imvelaphi yosapho olutsha phantsi kwentsikelelo kaThixo, apho uthando luvumela abantu ababini ukuba babe kunye ngonaphakade.
Siyakwazi ukuqonda ukuba kukho iisakramente ezahlukeneyo ezenziwa njengoko kufuneka. Ngoku, izinto eziyinxalenye yeSakramente Esikelelekileyo sisonka somthendeleko (umamkeli), isakramente yewayini kunye nesibingelelo apho ezi zinto zingcwaliselwe, ezigqityiweyo ngabanxibelelanisi. Abafowunelwa ngabo bantu badla izinto zeSigramente Esikelelweyo. Unokuba nomdla Umthandazo kuSanta Charbel.
Umthandazo kweyona sacramente ingcwele
Ukuqonda ukuba yintoni iSakramente Esikelelekileyo kunye nomsebenzi wayo, sinokuqhubeka ukuya kwinqanaba elilandelayo, eliza kufunda ngezantsi Umthandazo kwesona sacramente singcwele:
“Ndiyakudumisa Nkosi kunye neNtombikazi enguMariya, nazo zonke iingelosi kunye nabangcwele. Siyakudumisa Nkosi, siyakusikelela, siyakuthanda, siyakuthanda kwaye siyakubulela ngombuyiselo wabo bonke abo bangakudumisiabakusikelele, hayi bayakuthanda, abakuthandi, kwaye abakubuleli.
Siyakudumisa Nkosi ngenxa yokungaguquguquki kwakho, ngenxa yemfezeko yakho engapheliyo kunye nokusidala singenanto.
Siyakuthanda Thixo ongunaPhakade, ngaphandle kwesiqalo okanye isiphelo. Siyakuhlonela kwi-Omnipotence yakho, Omnipresence kunye ne-Omniscience. Siyamdumisa, Nkosi Thixo, Kumkani mkhulu unamandla. Unokwenza yonke into, uyazi yonke into, ubona yonke into, uza kuzo zonke izidalwa zakho ngenceba yakho engapheliyo.
Siyakuthanda, Nkosi Thixo Osenyangweni. Ukusuka kobude obuphezulu inzonzobila iphononongwa ihleli kwiikherubhi. Ungena nzulu kwintliziyo yomntu. Ujikelezwe yimitha, ukukhanya okungenakufikeleleka, ubungangamsha nozuko. Umhle, umhle kwaye unamandla kuzo zonke iimpawu zakho: ngothando lwakho, ukulunga, ubuhle, isisa, ubuThixo, ubabalo, uvuyo, ubukrelekrele, ubulungisa, amandla kunye nobulumko. Ulungile kwiNceba yakho kaThixo, Imfesane neMfesane yakho.
Uthandile abantu kakhulu kangangokuba wathumela uNyana wakho okuphela kwamzeleyo, iNkosi yethu uYesu Krestu, ehlabathini ukuze wonke umntu okholwayo kuye angatshabalali, kodwa abe nobomi obungunaphakade.
Siyakuthanda Nkosi Yesu. Wehla kuvuyo lukaYihlo osemazulwini kwaye wazithoba ngokuthatha inxaxheba kwindalo yethu yobuntu. Ujoyine igazi kunye nezinto zeNtombi Enyulu kaMariya kwaye wakhawulwa kwisibeleko sakhe sobuntombi ngamandla oMoya oyiNgcwele.
Uzalelwe ukuba ube kukuKhanya kwehlabathi, iNdlela yethu, iNyaniso yethu noBomi bethu, uThixo wethu, iNkosi yethu, uKumkani wethu noMsindisi wethu. Usithande kakhulu kangangokuba wanikela ngobomi bakho ngenxa yethu ngokufa kwakho emnqamlezweni.
Unyamezele ezona ntlungu zinkulu, izithuko kunye nehlazo. Kwaye ngamanxeba akho angcwele usiphilisile, ngeGazi lakho elixabisekileyo usisindisile. Ngokufa kwakho usinike ubomi. Siyabulela Nkosi Yesu. Siyakuthanda * Owu Nkosi.
Bawo ongunaPhakade, sikunika umzimba, igazi, umphefumlo nobungcwele boNyana wakho oyintanda, INkosi yethu uYesu Krestu, ekubuyiseleni izono zethu, izono zehlabathi liphela kunye nemiphefumlo kwiPurigator. Siyakuthanda * Owu Nkosi.
Lo mthandazo ufundwa xa uphambi komzimba kaKristu, kufuneka uguqe uze ufunde Umthandazo kwiSigramente Esikelelweyo. Icawa inenkolelo yokuba yonke into nguKristu, enomzimba wakhe, igazi, umphefumlo kunye nobuthixo ebusweni obungapheliyo. Oku kuyinyani kwaye kuyinyani. Ke ngoko, iSakramente Esikelelekileyo ithathwa njengommeli kaKristu, icawe ibonakalisa ukuhlonitshwa kwayo kulo mthendeleko.
ISakramente Esikelelekileyo inokubaluleka ngakumbi okanye ime phakathi kwezinye iisakramente kuba iisakramente eziqhelekileyo ziyangcwalisa, kodwa iSakramente Esikelelekileyo ikwayingcwele efanayo eguqulwe yangumthendeleko. Oku kungenxa yento ekuthethwa ngayo, isonka, iwayini, umzimba negazi likaKristu phambi kwesibingelelo.
Apha ukubaluleka okukhulu kunokujongwa xa uthetha ngeSigramente Esikelelekileyo, kwaye ngenxa yoko Umthandazo kweyona sacramente ingcwele.